Jose Mourinho Oo Xiddigii Koowaad Ka Dulqaaday Man United Oo Haatan Qarka U Saaran Inuu Ka Dulqaado Saxiixa Xiddig Kale Oo Weyn – Laacibnet.net
Jose Mourinho Oo Xiddigii Koowaad Ka Dulqaaday Man United Oo Haatan Qarka U Saaran Inuu Ka Dulqaado Saxiixa Xiddig Kale Oo Weyn
September 16, 2020 Balaleti
Tababare Jose Mourinho ayaa ku dardar gelinaya kooxdiisa inay Gareth Bale ku soo celiyaan Tottenham iyadoo ay socdaan wadahadalo u dhaxeeya labada kooxood oo la xiriira mushaharkiisa.
Los Blancos ayaa diyaar u ah inay iska iibiso Gareth Bale xagaagan ka dib todoba sannadood uu kooxda joogay, laakiin kooxaha badankood ayaa ka cararaya dalabka mushaharkiisa halka xiddiga reer Wales uu ku faraxsan yahay inuu dhameysto qandaraaskiisa Los Blancos oo uu iska qaato mushaharkiisa qaaliga ah.
Sidaasi darteed Real Madrid ayaa u soo bandhigtay kooxaha Premier League ee xiiseynaya xiddigaan sida Tottenham iyo Manchester United inay amaah ku qaataan islamarkaana Los Blancos ay bixiso kala bar mushaharkiisa 600 kun ginni isbuucii.
Tottenham ayaa ku horeysa tartanka saxiixiisa madaama Man United ay u sheegtay wakiilada Gareth Bale inay marka hore ka warsugayaan ceyrsashadooda xiddiga Borussia Dortmund Jadon Sancho.
Man United ayaa u cadeysay Gareth Bale inuu yahay kaliya dooqooda labaad islamarkaana ay u dhaqaaqi doonaan saxiixiisa kaliya haddii ay ku soo guuldareystaan saxiixa Jadaon Sancho.
Mourinho oo wax laga weydiiyay xiisahiisa Gareth Bale ayaa yiri;
“Waxaan isku dayay inaan Gareth Bale u soo saxiixo real Madrid taasoo ii suurtogeli weysay waqtigeygii halkaas, ka dib wuxuu yimid markii aan ka tagay kooxda. Wax qarsoon ma ahan taasi. Xitaa Gareth ayaa ka warqaba. Laakiin ma doonayo inaan ka sii hadlo in badan sababtoo ah waa ciyaaryahan Real Madrid ah.”
Tottenham oo tartan dhanka suuqa kala iibsiga kula jirtay Man United ayaa kaga badisay saxiixa daafaca bidix ee Real Madrid Sergio Reguilon iyadoo la filayo in saxiixa xiddigaan lagu dhawaaqi doono saacadaha soo socda.
Tottenham ayaa ogolaatay sharuudii ay Real Madrid ku iibineysay xiddigaan oo aheyd inay dib u soo iibsan karaan waqti walba, iyadoo Manchester United ay diiday qodobkaas dhigaya in Los Blancos ay dib u iibsan karto ciyaaryahanka.